Photo Gallery | Artist Khabar
Photo Gallery	जाडोले छुँदैन प्रियंकालाई ? ( ६ तस्बिर)	पुस, काठमाडौं । मंगलबार साँझ राजधानीको कुमारी हलमा चलचित्र लभ सासाको प्रिमियर गरीयो । थुप्रै नेपाली चलचित्र क्षेत्रका आर्टिस्टहरुका माझ गरीएको प्रिमियरमा नेपाली नायिकाहरु निकै सुन्दरी बनेर आएका थिए ।
चलचित्र नायिका केकी अधिकारी, कर्मा शाक्य र आशिफ शाह मुख्य भूमिका रहेको छ । प्रिमियर शोमा केकीको साथमा ऋचा शर्मा, वेनिशा हमाल, बर्षा राउत,..	बिहिबार बाट प्रदर्शन हुने ‘लभ सासा’को प्रिमियर, देखियो आर्टिस्टहरुको बाक्लो उपस्थिती	पुस, काठमाडौं । चलचित्र 'लभ सासा'को मंगलबार प्रिमियर गरीएको छ । काठमाडौंको कुमारी हलमा गरीएको प्रिमियरमा नेपाली चलचित्रक्षेत्रका आर्टिस्टहरुको बाक्लो उपस्थिती देखिन्थ्यो ।
पुस २८ गते बिहिबार बाट प्रदर्शन हुने यस चलचित्रमा केकी अधिकारी, कर्मा र आशिफ शाह मुख्य भूमिका रहेको छ । अस्ट्रेलियाबाट फर्किएकी सासा र नेपालका फोटो प्रत्रकारको..	एकिकृत मुसहर बस्ती शिलान्यास (१७ तस्बिर सहित)	पुस, काठमाडौं । महोत्तरीको बर्दिबासमा धर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले एकिकृत मुसहर बस्तीको सोमबार शिलान्यास गर्यो । नेपालका चर्चित कलाकार तथा स्थानिय राजनितिज्ञहरुका साथमा शिलान्यास गरेको हो ।
फाउन्डेसनको शिलान्यास कार्यक्रममा पुगेका कलाकार महजोडीले एक लाख रकम सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । त्यस्तै उत्त अबसरमा कलाकार किरण केसीले १०..	‘तिम्रो फिगर कोका कोला’ (तस्बिर)	पुस, काठमाडौं । चलचित्र 'अर्धकट्टी'मा समावेश 'तिम्रो फिगर कोका कोला' गीत हिट गीत हो । चलचित्रले बक्स अफिसमा खासै राम्रो ब्यापार गर्न नसकेता पनि गीतलाई पनि दर्शक तथा स्रोताले निकै रुचाएका थिए ।
साथै यसै चलचित्रमा अभिनय गरेर अझ चर्चामा आएको नायिका हुन् अशिस्मा नकर्मि । 'तिम्रो फिगर कोका कोला'की नायिका भनेरै बजारमा चिनिएकी अशिस्मालाई यस..	बिष्णुभक्तलाई श्रद्धाञ्जली दिन आर्टिस्ट देखि चर्चित नेता सम्म (फोटो फिचर)	पुस, काठमाडौं । ७९ बर्षिय आर्टिस्ट बिष्णुभक्त फुँयालको मंगलबार बेलुकी नाटकमा अभिनय गर्दा गर्दै बेहोस भएर निधन भयो । बुधबार उनको पार्थिव शरिरमा श्रृद्धाञ्जली दिनका लागी सयौं आर्टिस्ट देखी चर्चित नेतासम्म नेपाल प्रज्ञाभवन प्रतिष्ठानको परिसरमा पुगेका थिए ।
उनको शवलाई काठमाण्डौको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म..	यसरी उत्रिए सेलिब्रेटी रनवेमा आर्टिस्टहरु, हेर्नुस् ४० तस्बिर	पुस, काठमाडौं । राजधानीमा ४० बढी सेलिब्रेटीहरु रनवे भब्यरुपमा सम्पन्न भएको छ । पुनम इन्टरटेनमेन्ट एण्ड गौरी मल्लको आयोजनामा राजधानीमा बिहिबार साँझ आयोजित सेलिब्रेटी रनवेमा पुरानादेखी नयाँ कलाकारहरु रनवेमा उत्रिएका थिए ।
रनवे कार्यक्रमको सुरुवातमा चार आमाहरु भनेर रनवेमा बोलाइयो । त्यो भन्दा अघि नायिका गौरी मल्लले ‘आमा’ बोलको गीत..	नायिका साम्राज्ञीको पहिरनले ‘नेफ्टा अवार्ड’मा बाटो बिराएपछि… (१८ तस्बिर सहित)	पुस, काठमाडौं । नायक अनमोल केसीसँग मुख्य भुमिकामा रहेर चलचित्र 'ड्रिम्स'मा अभिनय गरेकी नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहको गएको शुक्रबार दुबईमा भएको नवौं नेफ्टा अवार्ड कार्यक्रम बिशेष रह्यो । प्राय अवार्ड कार्यक्रममा बिशेष गेटअपका साथमा जाने साम्राज्ञीले लगाएको पहिरनले सो अवार्ड कार्यक्रममा भने राम्रैसँग बाटो बिराएको देखियो..	‘बिन्दाबासिनी म्युजीक अवार्ड २०७३’ (फोटो ग्यालरी)	२०७३ साल मंसिर २४ गते शुक्रबार काठमाडौंमा भएको बिन्दाबासिनी म्युजीक अवार्ड २०७३ का झलकहरुः तस्बिरः गोपिकृष्ण चापागाई /आर्टिस्ट खबर
..	गायक सुनील बर्देवाको पार्थिव शरिरमा अन्तिम श्रृद्धाञ्जली (फोटो फोचर)	भदौ, काठमाडौं । बिगत डेढ दशक देखी गीत संगीतमै लागीरहेका गायक तथा संगीतकार सुनील बर्देवाको मंगलबार साँझ निधन भयो । मुखबाट एक्कासी रगत बगेपछि त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल महराजगंज लगेपछि उपचारको क्रममा सुनीलको निधन भएको हो ।
४४ बर्षिय सुनीलको बुधबार दिउँसो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रांगणमा श्रृद्धाञ्जलीका लागी पार्थिक शरीर राखिएको थियो..	नेपाली नायिकाहरु कस्ता कस्ता भएर आए एल.जी. फिल्म अवार्डमा (फोटो फिचर)	भदौ, काठमाडौं । यतिखेर नेपाली फिल्मक्षेत्रको अवार्डको सिजन चलिरहेको छ । बिभिन्न संघसंस्थाको आयोजनामा बर्षमा थुप्रै अवार्ड कार्यक्रमहरु हुने गरेका छन् । यसैबिच बुधबार (भदौ २२ गते) पनि सिने सर्कलको आयोजनामा एल.जी. अवार्ड सम्पन्न भयो । बिभिन्न २६ बिधामा दिइएको अवार्डमा केहि पृथक बिधाको अवार्ड पनि दिइएको थियो । यसैक्रममा बिभिन्न..	Pages:12345»